माछा वा लसुन - क्रेफिश लागि आहारा?
खेल र फिटनेस, माछा मार्ने
जीवन शैली को क्यान्सर hermits छन्। डेलाईट मा तेजी देखि प्वाल गहिरो retreating को slightest खतरा मा, आश्रय मा लुकाउने arthropod। धुलो बाहिर र बादल मौसममा खाना केकडे खोज्न - दिउँसो।
सामान्यतया तिनीहरूले नंग्रा अगाडि खींच र सीधा पुच्छर समातेर राति पानी मा सार्न, तर तिनीहरूले बन्द तर्साउन भने, उनीहरूले चाँडै फिर्ता, आफै मदत सेल बलियो blows को पुच्छर को। यो क्यान्सर एक ठाउँमा राखिन्छ कि विश्वास छ, तर यो छैन: यो हप्ता तिनीहरूले एक सय केही मीटर हटाउन।
आफ्नो लाईक क्यान्सर अनुपम हरेक जीवनमा कम्तिमा एक पटक एक बियर खोजे। आफ्नो माछा मार्ने एक जुवा खेल्नु, dobychlivoy र पनि छोराछोरीलाई लागि सुलभ छ। माछा मार्ने यस प्रकारको विशेष गियर वा ekipirovok आवश्यक छ। मात्र कुरा के तपाईं आवश्यक - क्रेफिश लागि केही जाल र चारा। यी arthropods, सफा नदी र प्रवाहको बस्न कहिलेकाहीं - यो ताल मा। दिन को समयमा तिनीहरूले burrows चट्टानको वा ड्रिफ्टहुड अन्तर्गत छायादार ठाडो बैंकहरू अन्तर्गत dug र रात शिकार लागि देख, तल साथ सारियो मुख्य रूप छन्। हिउँदमा, तिनीहरूले गहिरो जानुहोस्।
हाम्रो देश rakolovok प्रयोग व्यापक फँसाने प्राप्त गरेको छ मा, थप कि रूसी व्यवस्था यस्तो माछा मार्ने प्रतिबन्ध छैन।
माछा मार्ने जाल यस प्रकारको लाभ यो स्थापना र प्रमाणिकरण को सजिलो पूरा गर्न, संकुचित सजिलो छन्। बारम्बार निरीक्षण आवश्यक छैन Rakolovki। यो गियर अर्को फाइदा - कम मूल्य।
तपाईं चारा को प्रकारको फसाउन ठ्याक्कै ज्ञान, एक राम्रो क्याच प्राप्त गर्न सक्छन्। क्रेफिश ताजा माछा, शंख र समान जनावर, को तालाब को विशेषता, oilcake आकर्षित छन्। यो arthropod यस्तो ब्रीम, मछली, ब्रीम रूपमा उत्कृष्ट खाने माछा, एक अड्डा वा पाइक लिन अनिच्छुक गर्दा।
क्रेफिश लागि रोचक चारा - लसुन। एक मासु Grinder मार्फत लसुन यसलाई पारित यस उद्देश्यका लागि अनुभवी rakolovy, रोटी, प्राथमिकताको कालो को एक आवारागर्दी ~। त्यसपछि, परिणामस्वरूप ठूलो रोल्ड छ बल, gauze बोरा र शुल्क जाल तिनीहरूलाई राख्नु। एक यस्तो अंश, साथै एक माछा, सारा रातको लागि पर्याप्त छ।
को चारा - racheven प्रयोग कोण मिलाउने साथै यी arthropods माछा जस्तै तरिकामा पक्रेको हो। एकै समयमा, हुक मा "शान्त शिकार" गर्न यसको विपरीत, यो विधि छैन रूपमा मजबूत छ: क्यान्सर कुनै पनि समयमा भङ्ग गर्न सकिन्छ। र केहि फरक निपटने: तिनीहरूले एक छडी र आधा वा दुई मीटर लाइन यसलाई संलग्न लामो छन्। को चुच्चा समाप्त जलाशय तल मा अटक गर्दै छन्, र क्यान्सर को लागि एक लालच सँगै राखे।
छड-rakolovki अलग कम्तिमा पाँच मिटर दूरी मा राखिएको। तीन चार हरेक घण्टा जाँच गर्न आवश्यक छ। तिनीहरूले बिस्तारै तल बाट उठाएर र लगभग नेट मा सतह क्याच क्रेफिश छ। खपत गर्न उत्पादन cages मा राखिएको, तर यो एउटा ठूलो बाकस, पानी बिना ओसारपसार गरिन्छ।
सबैभन्दा आदिम र पुरानो विधि हो केकडे समातेर आफ्नो खुला हातले, र यो मामला मा क्रेफिश लागि कुनै पनि चारा आवश्यकता छैन। निस्सन्देह, यो विधि छैन चोट गर्न पौडी खेल्न सक्ने छैन ती वा डर लागि उपयुक्त छ।
तर जो साँच्चै क्रेफिश एक बियर गर्न चाहन्छ, तर पोखरि टर्च वा टर्च तल रोशन हात कुनै पनि improvised गियर गर्न सक्छन् छैन, एक, एक राम्रो क्याच डायल।
मा पुरानो दिन राम्रो थियो पक्रने लागि चारा किनारमा तिर crept अन्धकारमा आगो को किनारमा मा, र arthropods: क्रेफिश। तिनीहरूले यस मामला मा, चट्टानी तट मा तिनीहरूले केही सय गर्न भेट्टाउने सक्नुहुन्छ भन्छन्।
Seine Catfish ग्याँसचुलोबिना संग परम्परागत माछा मार्ने भिन्न
सबै भन्दा राम्रो मोडेल र समीक्षा एक समीक्षा: शिकार र माछा मार्ने लागि एउटा हेर्ने कसरी चयन गर्न
नोभेम्बर मा मत्स्य पालन। को वोल्गा, को डन र KUBAN मा माछा मार्ने समीक्षा
कालो आक्षेप: माछा मार्ने सुविधा
नदी Podkumok: वर्णन, माछा मार्ने, फोटो
रचनात्मक व्यवसाय: seamstress
निगल गरेको नेस्ट - क्रिमीआ एक प्रतीक
फ्रेम आवास प्रविधि: प्रविधि सुविधा र घर को निर्माण को चरणमा
फर्नेस-स्टोभेस - धातु पाइपबाट आधुनिक व्याख्या
कार्यस्थल मा एक पेशागत चोट
के भान्सा तल्ला के?
मेशिन लागि loudspeakers रूपमा पाङ्ग्रा वा इन्जिन महत्त्वपूर्ण छन्
बिरालोहरु मा कोथ संबंधी मुखशोथ: कारणहरू, लक्षण, उपचार
बीमा पेन्सन कोष को एक प्रमाणपत्र
चश्मा बिना 3D टिभी बजार जीत हरेक मौका